MEE WALIIN FALA HAABARBBAANNU: Sanyii Namaa’tiin – Beekan Guluma Erena
MEE WALIIN FALA HAABARBBAANNU: Sanyii Namaa’tiin	Beekan Erena
Politics Category October 15, 2016Oromo Revolution
MEE WALIIN FALA HAABARBBAANNU
1. Yaada Bu’uura
Impaayerri Itiyophiyaa jedhamttu kun humnna qawweetiin ijaaramtte hanga har’aatti qawween eegamtte kan turtte ta’u ishee ni beeknna. Fedhii isaanii malee mirga isaanii sarbamanii kan Impaayera kana keessa turan ummatoota heddutu jira.Eega impaayerri kun tolffamtte calqabee ummatoota Impaayera kanaa kan darbaa dabarssaan hacuuce bulchaa ture murnna ummata muraasa keessa ba’an turani.
Impaayera taate biyya ijaaramtte biyya ummattootnni garaagarummaa qaban heddumminaan keessatti federaaliizimiin tolffamu fedhii uummttoota kanaa irratti hundaa’uudhaan achii ol ijaarama (it has to be consent-based and negotiated). Kunimmo marii fi qooda fudhanna ummatoota hundumaa kan gaafatu waan ta’eef biyyattiin fedhi uumata irratti hunddooftte achii ol ijaaramtti jechuudha (bottom up). Ummatootnni kun dhiibba tokko malee haala bilisa ta’een mata mataanis ta’e waliin marii bal’aa deemssisu qabu. Gara biyya kana waliin ijaarraatti yoo ni adeemnna ta’e Impaayerri kun fedhii ummatoota biyyatti irratti hundooftte deebite ijaaramu qabddi (consent- based and negotiated statehood). Sanas ta’e kana adeemammiin keenya maal ta’u qaba ? Gama uummata Oromootiin qophiin godhamu qabu maali?
2. Kan Walikkeenya Ilaalchise
Ummatnni Oromo calqaba waan fedhu sirriitti beeku qaba. Akka kootti Oromoon abba biyya isaa ta’u qaba isa jedhu irratti garaagarummaan waan jiru natti hinfakkaatu. Warri isa kana hinfudhanne yoo jiraatan warra akkasi waliin dhimma hinqabnnu. Warri abba biyyummaa Oromo irratti yaada tokko qaban tarii akkaataa Oromoon abba biyyummaa isaa mirkaneeffatu irratti garaagarummaa qabaachu ni danda’u. Garaagarummaa kun diina waloo waliin akka isaan hinlolle isaan dhorku hinqabu, hindanda’us. Hanga diina waloo dhabamssifnnutti abba biyya keenya taanutti waliin tumssuun ni danda’ama. Isa booda dhimmi keenya kan walii keenya ta’a, kan firri waliin haasa’ fixate ta’a. Isaan kun yoo waan borii irratti mataa walcabssaa bara isaani kan fixan ta’e,kan borii bor taate hafti.Bor sana oso hinargin hafu. Akka yaada kootiitti hundumtti keenya amma Wayyaane lolu irratti walhaataanu dura isheen nurra haagalttu. Kana gochuuf hundumtti keenya qabsso diina dhabamssiisu irratti fuuleffachu qabnna. As irratti ummatnni keenya kan dhaabota adda addaa kana faana hiriirani yaada bor maalttu t’aa irratti yeroo isaanii balleessan dhaabu qabu. Beekas haata’u osoo hinbeekin yyadi akkasii diinaaf tola. Humnna diina irratti boba’ee lolu qabu harkka hidhee gaad’iee kaa’a (disarming). KANAAFU HUMNNOOTA ABBAA BIYYUMMAA OROMOTIIF LOLAN GIDDUUTTI OLOLLI BIFA KAMIINU ADEEMSSIFAMU DHAABBACHU QABA.
Garaagarummaan dhaabbilee Oromo giddu jiraatu tarii bifa qabsso hidhannootiif qabsso hidhanno- malee (non-violence) irratti ta’u danda’a. Duraan dursse wanti beekamu qabu qabssoon hidhannoo-malee (non-violence form of struggle) qabsso hidhannoon walsimssiisanii deemssisuun kan danada’amu ta’u isaati. Ummatnni keenya hubanna akkasii akka inni horatu gochuu irratti dhaabbileen Oromo midiyaan Oromo hayyootnni Oromo bal’inaan irratti hojechu qabu. Keessuma hogganttootnni qabsso bifa lammenu (both non-violence and armed struggle) walsimssisanii adeemssisu irratti walhubanno fi ejjennoo cimaa qabaachu qabu.Kana jechuun WARRI QABSSO HIDHANNO JEDHANIS WARRI QABSSO MEESHA-MALEE JEDHANIS QABSSO ISAANI WALSIMSSIISANI ADEEMSSISU WAAN TA’EEF WALIIGALU QABU.
Gama warren qabsso hidhanno murtteessaadha jedhaniitiin JAARMIYAA TOKKO JALATTI GURMMAA’UUN DIRQAMA ISAANIITI. QABSSOON HIDHANNO FACA’AAN INJIFFANNO ARGAMSSIISU HINDANDA’U. KANAAFU QABSSOON HIDHANNO OROMO HATAMAAN HIN WAALTA’UUTU YOO TA’E GAAGA’AMA GUDDAATU UUMMATA OROMO IRRA GA’A JEDHEEN YAADA’A.
WARRI QABSSO HIDHANNOO- MALEE DEEMSSISANIS AKKUMA KANA WALII GALTTE TOLFFACHU QABU. YEROO INNI TOKKO WAAN TOKKO JEDHU INNI BIRAAN WAAN BIRAA JEDHA YOO TA’E QABSSOON UUMMATAA NI FACAATI DIINARRAAN MIIDHAA GA’UUN HINDANADDA’MU. AMALLEE IDDO TOKKOO TOKKOTTI HOGGANSSA WAALTA’E DHABUUN IRRAA KAN KA’E GAAGA’AMNNI MUL’ATAN NI JIRU.
3. Waa’ee Hariiro Qabsso Ummata biro Waliin Uummachu
Dubbiin dhibdduun dhiheenya kana deddeebite kaatu tokko waa’ee hariiro uummata Amaaraatiif warra biro wajjin tolffachuuti. Haala amma uummatnni Amaara Wayyaane loluutti seene jiru kana keessatti Amaara akka diinaatti fudhachuuniif hariiro hinuummnnu jechuun tofttaa Wayyaaneen waggooti 25 duraa calqabdde itti fayyadamaa turtte duraa fashaluu isaatiin isheen itti gaabbaa jirttu harka isheetti deebisuudha. Isaan waliin Wayyaane loluun yoo bu’aa isaa malee miidhaa isaa hinarggu. Isaan mirga Amaaraatiif lolu. Nuti mirga Oromotiif lolla. Nu lammeenu Wayyaane lolla. Waan isa boodaammo yoo tole waliin toffanna yoo dhibemmo isaanis biyya Amaara jiru nutis biyya Oromo jirra.
Waa’ee Amaara ilaalchise uummata Amaaraa isa biyya Amaara jiruuf warren olaantummaa Amaara afarssan (old die hard Amhara elites seeking to restore the old Amhara hegemonic system) gargarbaasnne ilaalu qabnna. In fact, we have to isolate those seeking hegemony from the Amhara people fighting for ther right to self determination. Amaarri akka Amaaraatti qabssoon inni TPLF irratti adeemssisu qabsso keenyaaf tumssa cimaa yoo nuu ta’e malee waan nu miidhu hinqabu. Humnna TPLF irratti dhagaa guuru hundumaa waliin tumssa qabsso tolffachuun bu’aa qaba. Humnna TPLF ni facaasa, ni laaffisa.Asrratti fageessanii yaadu feessisa. Humnni Amaaraaf Oromo yoo waltumsse qabsso yoo Wayyaane irratti qindoominaan deemssise humnni Wayyaane kana dachee bal’aa kana irra faca’uun irbbaata qabssa’ota keenyaa taate hafti. Kanatti yoo uummatootnni biraa dabalaman kufaatiin Wayyaane ni saffisa.Akka an jedhutti Oromoon humnnootnni farra Wayyaane ta’an hundumttu akka tumsa qabsso uumman gochu qaba. Ummatni Oromoon Gaanffa Afriika kana keessatti hojii isaan gitu gara hojechuutti cehu qaba.
Anuma dabalatee seenaa dabre irraa ka’uun Habashaan nu dagu jenna. Gaaffiin ka’u qabu garu, nuti maaliif yeroo hundumaa dagamnna? Isaan eenyu nu daguuf nutimmo eenyyu dagamuuf? Ilaalchi kun sykoloji of xiqqeessani ilaalu irraa madda. Oromoon ilaalcha akkasi mo’achu qaba. Inni biraa kaleessi har’a mitui. Ammaan booda biyyatti kana keessatti humnna Oromoon daga jedhee yaaduun barri isaa dabreera jechu dabda’u qabnna. Homtinu sichi nundhaabu jedhaa jirti Qeerroon Oromo. Jechu qofa osoo hintaane agarssisa jirti. So gone are the days when others can deceive us.
4. Waa’ee walgahi Oromoon qofaatti Waamu
Dhiheenya kana Oromoon maaliif qophaatti walgahii waama gaaffiinjedhu ka’aa jira. Waa’een Impaayera Itiyoophiyaa deebisani ijaaru yammu ka’u ummatootnni biyyatti keessa jiran marii sadrkkaa lamatti adeemssisu qabu. Inni tokko uummati kamiyyu akka uummataaatti duraan dursse walgidduutti marii adeemssisu qaba. Itti aansse sadarkkaa lmmaffaatti ummatootnni biyyatti bakka tokkotti waliin marii biyyoolessa gochu qabu. Gama Oromootti yoo dhufnnu walgidduutti Oromoon maal fedha inni jedhu murttaa’u qaba. Isa fedhu kana argachuuf maal gochu qaba, eenyutu godha isa jedhu irratti waliigalu qaba. Walgahiin jedhamu kun Charterri jedhamu kun akka Oromootti eessa deemnna, warra biraa waliin yoo fala barbbaanna ta’e attamitti adeemnna gaaffiilee jedhaniif deebii fudhate dhihaata.
Oromoon walgahii kan isaa ta’e kana irratti maaliif ormma waama? Akka Oromootti mariin sadarkkaan calqaba kun sirriitti itti hinqophaa’amu yoo ta’e, Itiyoophiyaa ishee duriitu bifa biraan deebi’ee dhufuuf jira. Ormmi waan fedhee yoo jedhe nuti duraan durssine akka Oromootti maal akka feenu irratti walii galu qabnna. Isaanis akkuma kana akka mata mataatti waan fedhan irratti walii galu danda’u. Isa booda sadarkkaa lamaffaatti akka uummatoota Itiyoophiyaatti waan feenu qabanne dhihaachuun biyyattiin kan fedhii uummattoota irratti hundooftte (Negotiated statehood) ijaramttu gochuun ni danda’ama. Kanaafu walgahiin waliini yeroo sana malee amma Oromoon waamu hindanda’u. Eenyu yyuu yoo waame adeemssi isaa sirri hinta’u. Sun osoo hinta’in calqabuma kana walgahiin waamamu kan waliini ta’u qaba yaadi jedhu Itiyoophiyaa ishee tolfamtte jirttu haasuphinu jechuudha. YAALI ITIYOOPHIYAA SUPHUUF GODHAMU KAMIINU OROMOON FUDHACHU HINQABU. They assume that Ethiopian statehood has already been there long ago. But we are saying it was not consent-based and negotiated. Nuti biyyattiin fedhi uummattoota irratti hunddooftte deebite ijaaramu qabddi jenna. In a way, we are saying Ethiopia has to be recreated (not reformed) so as to make it consent-based.Akka isheen itti ijaaramu qabddu ilaalchise waan fudhanne dhihaannu qopheeffachuudhaaf walgahii teenya. Kun uummata keenya birattis warra biyya waliin ijaaru feenu biratis sirriitti hubatamu qaba.
Akka waliigalaatti nuti Itiyophiyaan fedhii Oromo sirriitti keessumssiiftu ni ijaaramtti taanaan jibba hinqabnnu. But the problem is as things stand, in the existing state structure, there is an embedded and structural set up that has to be completely done away with. The system is totally alien to Oromo value system, governance system. Ummatnni Oromo sirnna Gadaa kan asii ol ijaaran demokratawa qaba. Kun ijaarssa godhamu keessatti iddo qabaachu qaba. Oromummaaniif Gadaan Oromo simatamu qaba. Itiyoophiyaan Oromoof akasumas Gadaa isaatiif iddo hinkennine demokratawa ta’u hindanddeessu.
Akka Oromo tokkoo yeroo ammaa kana Oromiyaa keessa jirataa jiruutti hawwiin ko wlgahiin amma itti adeemamaa jiru duguuginssa sanyii nurratti adeemssifamaa jiru qalbbiitti qabate taa’ama jedheen yaada. Hafuura kanaan kan taa’amu yoo ta’e walgahiin kun fala tokko nu fidu danda’a jedheen amana. Walgahiin kun fala wahii fudhate as hinba’u yoo ta’e duguuginssa sanyii uummata keenya irraatti godhamaa jiruuf tarii caalaattillee itti fufuuf jiru hambisuu hanqachu isaatiin itti gaafatama seena jalaa hinba’un jedha. Seenaa hojechuudhaan kabaja namummaaf Oromumma halagaan nu dhabssiise haadeeffannu.
Horaa bulaa. Milkaa’a.
Injifannoon uumata Oromootiif!
← #OromoRevolution LABSII MUDDAMAA WAYYAANEEN BAAFTE LAAMSHESSUUF:Wayyaaneen labsii sodaa maalif labsite? Akkamiin irra aanna?-Waliif Daddabarsaa…Mo’ichi keenyuma!!!
1 | Page የወያኔ ካድሬ ካህናት አደብ ይግዙ !! Date; 10/9/2016 ዓም “ By ዋቁማ ጮቢ Email; ijoolleejeldu.16@gmail.com: Must Read →